पूर्वमन्त्री बस्नेतको ६१ करोड ‘कालोधन’ फेला
काठमाडौं, २ साउन । पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनकुमार बस्नेतले स्रोत नखुलेको ६१ करोड रुपैयाँ लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको छ । काठमाडौंको महाबौद्धस्थित प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पूर्वमन्त्री बस्नेतको नाममा ठूलो रकम निक्षेप राखेको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ । विभागले ..
रुपन्देही, २ साउन । रुपन्देहीको बुटवल बेलहिया सडक खण्ड अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपाल..
मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट
काठमाडौँ, १ साउन । ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)..
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको डिपिआर हुँदै
काठमाडौँ, १ साउन । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्ड..
बाढी र डुबानको क्षतिबारे बुझ्न मन्त्री र सांसदको टोलीसहित नेता नेपाल प्रदेश.२ मा
काठमाडौं, १ साउन । केही दिनअघिको भारी वर्षाका कारण पुगेको क्षतिको अवलोकन गर्न मन..
काठमाडौँ, १ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्थाहरुलाई दर्ता गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म निजी संस्थाले आफूखुशी फोहर सङ्कलन गर्दा एकातिर समन्वय नभएको र अर्कातिर राजश्व नआएको भन्दै महानगरले निजी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । अहिले निजी कम्पनीले दैनिक ८० देखि १०० टिपर फोहर सिसडोलमा वि..
गाईघाट, १ साउन । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कदमाहा हुँदै उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट जोड्ने गाईघाट– कदमाहा सडकखण्डअन्तर्गत गाईघाटको त्रियुगा नदीको पक्की पुलको पूर्वी भाग केही दिनअघि आएको निरन्तर वर्षा र बाढीका कारण अहिले भत्कन थालेको छ । चार दिन लगातारको वर्षा तथा बाढीका कारण त्रियुगा पुलको पूर्वीभागको छेउको पिलर..
काठमाडौँ, ३१ असार । सरकारले भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास शुरु गरेको छ । देशभित्र अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानले विद्युत् माग उल्लेख्य रुपमा गिरावट आएपछि सरकारले बढी भएको विद्युत् भारत पठाई सो अभ्यास गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “यही अस..
उदयपुर, ३१ असार । उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिकाको वडा नं १ र ८ मा पहिरोले दुई घर पुरिँदा र बगाउँदा दुई बेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गए राति १ः०० बजे गएको पहिरोका कारण रौतामाई गाउँपालिका–८ का रीतबहादुर रिठ्ठामगरको घर पहिरोले पुरेको छ । राति माथिल्लो डाँडाबाट खसेको पहिरोले घर पुरिँदा रीतबहादुरका ५६ [&hel..
सय बढी गाउँँ पहिरोको उच्च जोखिममा
काठमाडौं, ३१ असार। मुलुकका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाका कारण भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका सय बढी गाउँँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । ती गाउँका १ हजार ८ सय परिवार पहिरोको जोखिमका कारण पानी पर्दा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका सयभन्दा बढी गाउँका १ हजार ८ सय [&hel..
काठमाडौँ, ३१ असार । मध्य र तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित बनेकाको उद्धार कार्य सोमबार सकिएको छ । उद्धार सकेलगत्तै राहत वितरणका प्रक्रियामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रवेश गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्धारपछि सोमबार घर फर्कन मिल्ने फर्किन थालेका छन् । घरमा अझै बस्न नसकिने अवस्थाका विपद् पीडितलाई स्थानी..
काठमाडौँ, ३१ असार । अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि फोहोरको पोको बिसाउने मनशाय त छैन ? यसो हो भने महानगरीय प्रहरी परिसर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीले तपाईंलाई सीसीटीभीबाट पहिचान गरी ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । महानगरपालिकाल..
काठमाडौँ, ३१ असार । ७२ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६(७७ को बजेट १० असारभित्रै गाउँ तथा नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, महिना सकिनै लाग्दा पनि ती स्थानीय तहले गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेका ..
काठमाडौँ, ३१ असार । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको चार महिनापछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेता र सरकारी टोलीबीच पहिलोपटक औपचारिक छलफल भएको छ । गत आइतबार भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको एक होटेलमा भएको यो छलफलले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको सरकारी टोलीको भनाइ छ । सरकारी टोलीको प्रतिनिधित्व तत्कालीन व..
काठमाडौँ, ३१ असार । गणतन्त्र स्थापनासँगै ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भयो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १ मा भनिएको छ, ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ ।’ सोही ऐनअन्तर्गत नारायणहिटीसहितका विभिन्न दरबार मात्र होइन, करिब २५ हज..
नेकपा एकता प्रक्रिया
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकताले अन्तिम रूप पाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन लगभग टुंगिएको छ भने पोलिटब्युरो गठन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्तमा एकता टुंगिने बताए पनि केही दिन लम्बिने देख..
सम्बन्धमा शंका बढ्दा डिएनएसम्म
काठमाडौं, ३१ असार । साता दिन पहिले मात्रै खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा एक महिला आफ्नो २१ वर्षीय छोराको ‘डिएनए’ परीक्षणका लागि आइपुगिन् । विवाह भएको १९ वर्षपछि र छोरा १८ वर्षको हुँदादेखि सुरु भएको तनावका कारण उनी अदालत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान्ले स्वदेश फर्किएदेखि नै आफू र ..
काठमाडौं, ३१ असार । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४(७५ को पहिलो १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधि (साउनदेखि वैशाख) सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको हो । दक्षिण कोरिया र मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा धेरै घटेका छन् । मलेसिया जाने कामदारको संख्या ..
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने छोराबुहारी सम्मानित
चरिकोट, ३० असार । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष हेरचाह गरी पालनपोषण गर्ने २१ जोडी असल छोरा बुहारीलाई सम्मान गरेको छ । गाउँपालिकाले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई माया ममतापूर्वक पालनपोषनमा ध्यान दिने २१ जोडी छोरा, बुहारी तथा छोरीलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आइतबार सम्मान गरेको हो । आथिक वर्ष ७५÷७६ अ..
मकवानपुरमा पहिरोले पुरिएर आमाछोरीको मृत्यु
मकावानपुर, ३० असार । मकवानपुरमा पहिरोले पुरिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । मकवानपुरको ईन्द्रसरोबर गाउँपालिका १ मार्खुमा आइतबार राति खसेको पहिरोमा पुरिएर एकै घरका आमाछोरीको मृत्यु भएको हो । पहिरोमा पुरिनेमा ईन्द्रसरोबर गाउँपालिका १ मार्खुका कान्छीमाया बलामी र उनकी १८ बर्षीया छोरी बबिता बलामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प..
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौंँ ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रासामु जलवायु परिवर्तका असर र चुनौतीको सामना गर्न जनतालाई बढी सशक्त बनाउने र त्यस्ता असरलाई सम्बोधन गर्न तयार रहनेबाहेक अरु उपाय नभएको बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा यहाँ आज आयोजित जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको संव..
कुलेखानीको जलाशय भरियो, आयोजना पूर्णक्षमतामा चलाइँदै
काठमाडौँ, ३० असार । पछिल्ला दुई वर्षदेखि भरिन नसकेको मकवानपुरमा रहेको इन्द्रसरोवर असारमा नै भरिएको छ । जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘पावर ब्याङ्क’ का रूपमा रहेको कुलेखानी जलाशय भरिएपछि सरकारले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमितरूपमा विद्युत् उत्पादन..
कुलेखानीको बाँध खोल्ने तयारी स्थगित, टर्वाइनबाटै निकास गरिने
काठमाडौं, ३० असार । कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको सरोवरको बाँध खोल्ने तयारी स्थगित गरेर टर्वाइनबाटै पानीको निकास दिने प्रयास भईरहेको छ । कुलेखानीको ड्याम भरिएपछि खोल्ने तयारी भएको थियो । कुलेखानी खोला हुँदै वाग्मती खोला भएर बग्ने भएकाले वाग्मती आसपासका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान ताम..
डेढ दर्जन घर पहिराले भत्कायो, सयौँ घर जोखिममा
उदयपुर, ३० असार । पाँच दिनदेखि आएको निरन्तर भीषण वर्षाको कारण उदयपुर जिल्लाको मध्य पहाडी तथा पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न गाउँपालिकामा अहिले डेढ दर्जनभन्दा बढी घर पहिरोले भत्काएको छ भने सयौँ घर उच्च जोखिममा परेका छन् । जिल्लाको मध्य पहाडी क्षेत्रको उदयपुर गढी गाउँपालिकामा गएको पहिरोको कारण वडा नम्बर ४ र ५ मा दशवटा घर पहिरोले [&hell..
भरिएको कुलेखानी खोलिँदै, सचेत रहन आसपासका नागरिकलाई आग्रह
हेटौडा, ३० असार । अत्याधिक पानी परेपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल भनेर चिनिने कुलेखानी ड्याम इन्द्रसरोवर भरिएर खतराको सङ्केत देखिएपछि ड्यामको ढोका खोलिने भएको छ । कुलेखानीको ड्यामको ढोका खोलीने भएकाले मकवानपुरको भिमफेदी, इन्द्रसरोवर, वाग्मती गाउँपालिका, रौतहटको नुनथर, चन्द्रपुर, क्यान्टिन, सर्लाहीको विभिन्न क्षेत्र, सि..